Tompon'andraikitra amin'ny orinasa | Martech Zone
Ampamoahina ny orinasa
Talata, Febroary 8, 2011 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Azoko atao ny mizara tantara mampihoron-koditra aminao amin'ny tantarako amin'ny banky sy carte de crédit. Ny sasany amin'izy ireo dia nanaiky fa diso ahy fa ny ankamaroany dia ny fihetsika tsy mampihomehy ataon'ny banky. Manontany tena aho ny amin'ny fomba ahitan'ireto tovolahy matory amin'ny alina ireto… ny tombom-barotra, ny fandoavam-bola, ny bonus ho an'ny mpanatanteraka ary ny sarany mihoampampana mampihomehy dia tsy nampihetsika azy ireo akory hanatsara ny rafitr'izy ireo.
Ity misy ohatra tsara iray… ny karatry ny orinasako dia novonoina indroa nandritra ny dia nataony. Talohan'ireo dia roa ireo dia nampahafantariko ny banky fa handeha aho ary hiantohana fa tsy voamarika saina aho. Nandany fotoana ireo antso - nikatona indroa aho hetsika mampiahiahy. Roa no efa ampy… ary ny rafitra taloha sy ny tsy fahampian'ny fanohanana amin'ny faran'ny herinandro sy ny alina dia nahatonga ahy hiverina tany amin'ny banky lehibe iray. Hantsoinay hoe JP izy ireo.
JP dia manana rafitra an-tserasera mahafinaritra. Manana fahaiza-manao tariby vahiny i JP. JP dia manana rindranasa ahafahako mametraka kiraro amin'ny fakana sary azy. JP dia manana fahaiza-mandoa vola amin'ny kaontiko aza. Angamba ny zavatra cooles… Nanokana banky manokana ho ahy i JP. Inona ny banky manokana? Olona tsy maintsy imailaka no antsoiko isaky ny manana olana aho. Avy eo ny bankiko manokana dia milaza amiko ny laharana 1-800 hiantso vonjy. Fanatsarana lehibe kokoa amin'ny rafitra taloha amin'ny fiantsoana ny laharana 1-800 fotsiny aloha. [Eny, esoeso izany]
BTW: Sipa malalako ny bankiko manokana ary fantatro fa manandrana manampy ahy araka izay azony atao izy. Tsy mahavaha ny olana anefa.
Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia mila manafatra tapakila fiaramanidina ho an'ny Handray fihaonambe any San Francisco amin'ny faran'ity volana ity. Nampiasa Kayak aho aloha ary tsy nahomby ilay carte de crédit. Avy eo nampiasa ny tranokala Delta.com aho ary tsy nahomby. Tamin'ireo fotoana roa ireo dia nilaza fa tsy mitovy amin'ny kaontiko ny adiresiko. Ny olana tokana amin'izany dia ny adiresiko dia miditra amin'ny fomba mitovy amin'ny tranokala roa ka tsy misy ny tsy fitoviana. Tsy nijanona aho fa nijanona teo am-piandrasana raha ny solontenan'ny Delta kosa no niantso ny bankiko hanamarina ny adiresy. (Tsara eraky ny Delta!)
Niverina ny solontenan'ny Delta ary nilaza tamiko fa nilaza tamin'ny bankiko azy ireo fa tsy mifanaraka ny adiresiko. Tezitra aho izao. Manaraka izany ny ahy banky manokana. Ny bankiko manokana dia mifandray amin'ny fanohanana ara-teknika ary manoro hevitra ahy izy ireo mba hanandramako ny adiresiko na tsy misy ny Zip4 amin'ny kaody zipiko. Tena matotra.
Ny tranokala Delta dia tsy mamela fanitarana Zip4, noho izany ny fotoana very teo anelanelan'ny mailaka nataoko sy ny antso nataon'ny bankiko manokana ho an'ny ekipa mpanohana azy dia fanasan-damba. Ampahafantariko ny bankiko manokana fa mbola tsy mandeha izy io. Efatra andro aty aoriana ary tsy manana ny tapakila aho.
Amin'izao fotoana izao dia mety manontany tena ianao hoe maninona aho no tsy mandray fotsiny ny iray amin'ireo karatro hafa ary mandoa ny tapakila. Nahoana? Satria heverina fa mandeha io. Ity no ilàna ny carte de crédit orinasa… amin'ny fanaovana zavatra toy ny famandrihana fitsangatsanganana, fividianana fitaovana sns. I do Manana fomba hafa hividianana ny tapakila ary azoko antoka fa ny ankamaroan'ny olona dia nanakana ny rafitra ary nahavita izany.
Fa tsy handeha aho.
Samy niaritra tamim-pahatsorana ny famolavolana be loatra tamin'ny fiainantsika rehetra isika. Nizaka ny hadisoan'ny rindrambaiko izahay, ny olan'ny banky, ny olana amin'ny telefaona, ny olana amin'ny Internet… tsy mora ny fianatsika amin'ireto zavatra rehetra ireto, lasa sarotra kokoa io. Ary rehefa manampy fahasarotana bebe kokoa isika dia mahita olana bebe kokoa. Ny ivon'ireo olana rehetra ireo dia ny nanantenanay ny fivoaran'ny vahaolana ary tsy hitana andraikitra amin'ny orinasa intsony izahay. Mora kokoa ny maka carte de crédit hafa noho ny miantso sy mandefa mailaka hatrany amin'ny bankiko manokana.
Fa rahampitso dia ho very ny famokarana bebe kokoa amin'ny telefaona ao anaty sy amin'ny mailaka miaraka amiko banky manokana. Ny vokariny (indrisy) dia hijaly, toy ny ekipa teknolojia iarahany miasa. Hataoko izay hahamety an'ity - mba tsy hizahan'ny hafa ny zavatra iainako.
Raha samy tompon'andraikitra amin'ny orinasa isika rehetra, dia manohy manatsara ary handray soa avy amin'izany isika rehetra.
Tags: andraikitrabankyorinasacarte de créditfamokarana
Ny iPad Hype… Maninona ianao no manaraka
Mitsidika hatramin'ny 25% Hatramin'ny fanamboarana indray